Junkyard - Waa maxay sababta sheekadan macnaha leh ee ku saabsan dayaca ilmaha ay tahay in la daawado - Muuqaalka Cradle
Goobta Qashinka - Maxaa Qisadaan Micnaha Leh Ee Ku Saabsan Dayaca Ilmaha Ay Tahay Waa In La Daawadaa
Leave a Comment on Junkyard - Waa maxay sababta sheekadan macnaha leh ee ku saabsan dayaca ilmaha ay tahay in la daawado
Junkyard waa mugdi in la yiraahdo ugu yaraan, laakiin maaha kaliya dareenka murugada iyo niyad-jabka ee filimka oo dhan kaas oo qeexaya kormeerkan, ugu dambeyntii sidoo kale dhamaadka kaas oo soo saara mawduuc ka duwan gebi ahaanba. Sheekada Junkyard waxay daba socotaa laba dhallinyaro ah oo la yiraahdo Paul iyo Anthony oo saaxiibo noqday. Ma aragno sida ay u noqdaan saaxiibo waxaanan u qaadan karnaa inay si cadaalad ah saaxiibo noqdeen dhawaan. Waxay ka soo jeedaan asalyo kala duwan tanna waxaa lagu muujiyay filimka oo dhan.
Filimku wuxuu ku bilaabmayaa nin iyo naag dhex socda tareenada dhulka hoostiisa mara. Waa iska caddahay in ay habeen ku jireen oo ay ku raaxaysanayeen. Waxay la kulmaan dad kala duwan oo ku jira tareenada dhulka hoostiisa mara, kuwaas oo bulshada reer galbeedka aan u tixgelineyno kuwa aan la rabin, isticmaalayaasha daroogada, sakhraan iyo tuugsi. Way iska caddahay in ninka iyo naagtu ay dadkan hoos u eegaan marka ay u socdaan dhinaca tareenka dhulka hoostiisa mara. Nin baa xataa u yimi oo ninkii isbadel waydiistay laakiin si akhlaaq darro ah ayuu u diray.
Intii ay ku sii jireen tareenka dhulka hoostiisa mara ayaa ninku waxa uu xaday boorsada dumarka, Bawlos (ninkii) ayaa ka daba cararay, baacsiga wuu sii socdaa ilaa ay ka gaadhaan qaybta isku xidhka ee u dhaxaysa baabuurta.
Ninkii waa la tooriyeeyay, ka dibna waxa nala geeyay goob dib u dhacday oo aanu ku aragno ninka oo caruur ah. Iyadoo ilmo kale. Waxaan marka hore aragnaa Paul iyo Anthony markii ay galeen Junk Yard oo ay ka buuxaan baabuur la jarjaray. Waxa ay goobtan ku sugan yihiin oo kaliya ilaa 12 waxana ay si cad u muujinaysaa in wiilashu ay si farxad leh u dhex yaaceen beerta iyaga oo burburiyay baabuurtii hore u xumaaday.
Waxaan aragnaa sida taxadar la'aanta ah oo aan waxba galabsan Paul iyo Anthony ficiladooda muuqaalkan waxayna muujineysaa in aragtidooda aduunka ay la mid tahay inta badan dhalinyarada da'da ah. Iyagoo jebinaya qaar ka mid ah baabuurtii duugoobay ee labada wiil waxay la kulmeen baabuur duug ah, oo u muuqday mid aan la isticmaalin markii hore. Wiilashii way qoslayeen markii Anthony uu burburiyay daaqadda laakiin markaas qaylo ayaa ka soo baxday safarka, waa nin. Qori ayuu ku fiiqay wiilashii markii ay carareen.
Wax yar ka dib waxaan aragnay Anthony iyo Paul oo ku soo laabtay waxa u muuqda inuu yahay guriga Anthony. Wuu garaacay gambaleelka albaabka waxaana isla markiiba sawir ka soo baxay xanuunka galaaska, waa Anthony hooyadii. Daaqadda ayay furtay oo u dhiibtay Anthony qoraal, iyada oo u sheegaysa in uu naftiisa helo xoogaa cunto ah.
Intaa ka dib waxaa lagu arkay goob cunto lagu iibiyo oo cunto ka iibsanaya. Bawlos hooyadiis ayaa markaa wacday oo gudaha u galay gurigiisa. Dabadeed waxa bilaabmaya roob waxaanan aragnaa Anothy oo banaanka ku garaacaysa albaabka oo raba in uu gudaha ku soo laabto. Waxaan ka aragnaa aragtida Bawlos inuu leeyahay guri wanaagsan iyo hooyo daryeel leh. Labadoodaba waxaa kala gooyay garaaca Anothy, hooyadii Paul ayaa dibadda u baxday si ay Anothy dib ugu celiso gudaha iyo dibadda roobka.
Farqiga u dhexeeya wiilasha
Haddaba waxaan muuqaalkan ugu horreeya ka arki karnaa in labada wiil ay kala duwan yihiin, haddana saaxiibo yihiin, haddana kala duwan yihiin. Bawlos wuxuu leeyahay hooyo wanaagsan oo daryeesha isaga oo sidoo kale fiirisa kuwa kale, xitaa Anthony, oo u muuqda inuu haysto nolol aan nasiib badan lahayn. Tani waa markii ugu dambeysay ee aan aragno Anthony iyo Paul iyaga oo caruur ah laakiin wax badan ayay noo sheegaysaa.
Farqiga u dhexeeya Anthony iyo Paul
Wax aan jeclaan lahaa in aan ka sheego filimkan oo ay ka sii muhiimsan tahay qeybtii hore ee kiisa waa xaqiiqda ah in wada hadal yar uu jiro, xitaa muuqaalada dambe. Filimku waxa uu maareeyaa in uu tan ku soo saaro muddo gaaban oo cajiib ah, maadaama uu jiro 18 daqiiqo oo keliya.
Qeybtan hore ee filimka waxaan cadeyneynaa in Paul iyo Anthony ay yihiin saaxiibo, waxay ahaayeen in muddo ah. Tan waxa la caddeeyey markaan aragno muuqaal kooban oo sawir muujinaya Paul iyo Anotony oo ah carruur yaryar. Tani waa muhiim maadaama ay inta badan dejinayso aragtideenna bilowga ah ee labada wiil iyo xiriirkooda. Waxa kale oo ay wax badan noo sheegaysaa innagoo aan aad ugu tiirsanayn wadahadalka.
Labada wiil waxa ku midoobay waxa ay wadaagaan, oo ah wax badan. Laakiin ugu dambeyntii, waxay leeyihiin asal iyo korriin kala duwan. Filimku waxa uu tan ku tusayaa waxa aan ku aragno dhacdooyinka ugu horreeya ee filimka ma aha wada hadal, laakiin iyada oo la tusayo shaashadda.
Tani waa wax aan aad uga helay filimkan. Inaad awood u yeelatid inaad wax badan ku sawirto wada hadal yar waa wax aanan runtii in badan ka arkin TV-ga, iska daa filim aad waqti yar u haysato inaad u sharaxdo sheekada daawadayaashaada, Junkyard wuxuu awoodaa inuu taas sameeyo hab aad loogu qanci karo oo gaar ah.
Mar dambe sheekada waxaan aragnaa in Paul iyo Anthony ay xoogaa koreen oo hadda yihiin dhalinyaro. Waxaan filayaa inay ku saabsan yihiin 16-17 tan tanna waxaa sabab u ah qaabka ay u labistaan ​​oo ay u wada hadlaan midba midka kale. Inta ay ku fuulayaan mootada way jabtay. Kaliya kuma jabna waddo kasta oo duug ah inkasta oo ay dhacdo in ay ag taal Junkyard ay booqdeen ama ay booqan jireen markii ay yaraayeen.
Waxay baarayaan baaskiilka markii wiil ay isku da' yihiin balse ka weyn uu soo baxay isagoo sharxaya inay tahay tuubahooda qiiqa ka baxa ee dhibka haysta, isagoo sheegay inuu mid cusub ku leeyahay daarada. Bawlos wuu ka warwareegay markii uu arkay in safarrada ay wiilashu u socdaan uu yahay kii ay jebiyeen markii ay yaraayeen. Waxa kale oo la xaqiijiyey in canugga ninka daba taagan ee muuqaalka ugu horreeya ee lagu magacaabo “Duncan” uu isna yahay wiilka ninka.
Duncan ayaa Anthony & Paul u horseedaya Caravan
Waxa muhiimka ah ee ku saabsan muuqaalkan waa falcelinta Paul iyo Anthony labadaba iyo sida ay u arkaan dad iyo dhacdooyin kala duwan. Anthony waxa uu u muuqdaa in uu ogolaaday oo uu si indho la'aan ah u galay xaaladaha iyada oo aan hore loo sii fekerin. Bawlos wuu ka duwan yahay. Waxa uu ka warwareegaa agagaarkiisa iyo meesha iyo cidda aan loo malaynayn in uu la falgalo. Anthony waxa uu u muuqdaa mid xiiseeya wiilka wayn ee Duncan oo waxa uu ku dhawaaday in uu kor u eego, isaga oo daba socda isaga oo aan waxba waydiin, samaynayo waxa uu yidhaahdo isaga oo aan ka labalabayn halka Bawlos uu had iyo jeer ka fiirsado.
Ka dib markii ay soo ceshadeen qaybta baaskiilka Anthony, Paul iyo Duncan ka dib waxay ku kaxeysteen daroogo uu keenay Duncan aabihiis. Waxay aadeen goob daroogooyin ah halkaas oo aan mar kale aragno kuwa kale oo gudaha u galay iyada oo aan wax fikir ah laga helin halka Bawlos uu sugayo xoogaa bannaanka ah ka hor inta uusan u dhaqaaqin. 3-da wiil waxaa soo maray barbaarin kala duwan tanna gadaal ayaan ka noqon doonnaa.
Muuqaalka Guriga Daroogada
Duncan waxa uu daroogo geeyaa Paul & Anthony guri daroogo
Bawlos ayaa iska horimaad yar ku dhex maray godka maandooriyaha markii uu ku dul wareegay cagtii nin miyir daboolan oo kaliya in ninku ka kaco oo ku qayliyo. Sababtaas awgeed waxaa ka tagay Anthony iyo Duncan waxaana lagu qasbay inuu guriga u socdo. Tani waa meesha uu kula kulmayo "Sally" gabadh u muuqata markii Anthony iyo Paul lagu muujiyay dhalinyaro markii ay koreen. Waxay gooysaa goob ay Sally iyo Paul dhunkanayaan waxaana kala dhexgalay Anthony.
Paul iyo Sally oo dhunkanaya halka Anthony uu dibadda joogo
Sally wuxuu asal ahaan u sheegay Anthony inuu baxo, Anthony wuxuu u socdaa Junkyard halkaasoo uu markhaati ka yahay Duncan oo aabihiis ku xadgudbay. Anthony wuxuu caawiyaa Duncan kor u kaca oo ay labaduba wada socdaan. Muuqaalkani waa mid aad u fiican sababtoo ah waxay muujinaysaa naxariista Anthony u qabo Duncan in kasta oo ay ku adag tahay inay wada hadlaan.
Anthony wuxuu caawiyaa Duncan ka dib markii lagu xadgudbay
Waxay sidoo kale muujinaysaa in Anthony laga yaabo inuu u muujiyo Duncan xoogaa naxariis ah maadaama uu ogyahay sida ay tahay in waalidkiis ay dayacaan. Tani waxay ku dhowdahay inay siinayso meel ay ka wada siman yihiin oo ay ku wada jiraan waxayna ka caawinaysaa in la dhiso xidhiidh adag oo ka dhexeeya labadooda. Ka dib waxaan aragnaa Paul oo Sally ku soo laabanaya gurigeeda. Waxa uu arkay laba lugood oo ka soo baxay albaabka dhawr albaab oo hoos u soo dhacay. Si uu ula yaabay ayuu u arkay in ay tahay Anthony iyo Duncan sigaarka heroin-ka.
Paul wuxuu arkay Anthony iyo Duncan iyagoo isticmaalaya heroin ↑
Waxaan aragnaa in Anthony uu ku xanaaqay Paul tan iyo labada ay tahay in uu kala diro Duncan. Waxa kale oo xiiso leh in muuqaalkan uu yahay Duncan oo ah codka caqliga. Taas ka dib seddexdii madax ayaa dib ugu soo laabtay Junkyard, kaliya maaha Junkyard laakiin Caravan cabsi leh oo aan dib ugu soo aragnay muuqaalkii 2aad. Bawlos wuxuu ku sugayaa albaabbada oo ma soo gelin xitaa isagoo Duncan ugu yeedhay "Pussy" ma raacin.
Muuqaalka ugu dambeeya
Muuqaalka kama dambaysta ahi waxa uu imanayaa marka 3da wiil ay dib ugu noqdaan waxa aan u malaynayo in uu yahay guriga hooyada ee Anthony, in kasta oo aanay markaas joogin. Marna ma aragno Anthony hooyo prolly, xitaa ma ogin in haweeneyda bilawday filimku ay tahay hooyadiisa dhabta ah, waxaan u maleyneynaa oo kaliya inay tahay mid aan caddayn iyada oo loo marayo tilmaamteeda marka ay u dhiibto lacag si uu cunto ugu soo iibsado. Wiilashii waxay bilaabeen inay sigaar cabbaan, Anthony waxa uu siiyey Paul si uu u nasto. Tani waa meesha aan ka helno muuqaalkan.
Paul oo sigaar cabbaya Anthony Duncan
Sababaha qaar Bawlos waxa uu bilaabay in uu dhalanteeyo taasina waxa ay tahay, waxa aan aaminsanahay in uu miyirkiisu hooseeyo isaga oo u sheegaya in ay jirto khatar u dhow. Wuu booday oo dibadda u orday isagoo arkay in Junkyard oo dhami ay gubanayso. Muuqaalkii ugu dambeeyay ka hor goobta dhamaadka waxaan aragnaa Bawlos oo wax u sheegaya booliiska. Way iska caddahay waxa kani yahay runtiina uma baahnin sharaxaad waxa dhacaya ka dib, xitaa marka Anthony ay booliisku kaxeeyaan.
Junkyard ayaa gubatay
Markaa halkaas ayaad ku haysataa, sheeko weyn, oo si wanaagsan loo sheegay. Waxaan jeclaa sida sheekadu u dhacday, iyada oo aan xusin socodkii. Xaqiiqda ah in uu jiray wada hadal aad u yar haddana annagu daawadayaasha aad u fahamnay 17-kan daqiiqo ee aan aragno jilayaashan waa cajiib.
Duncan wuu cararay halka Anthony loo malaynayo in la xidhay
Waa maxay sheekadu in ay matasho?
Waxaan qabaa runtii saddexda wiil waxaa loo maleynayaa inay matalaan 3 marxaladood ama qaybaha carruurta iyo waxa dhici kara haddii carruurta si xun loo dayaco.
Bawlos waa inuu matalo ilmaha wanaagsan. Waxaan u aragnaa tan sida loo sawiray. Wadahadalka yar ee aan ka helno waxaan ka fahannay inuu yahay edeb, naxariis iyo akhlaaq ahaan ilmo wanaagsan. Waxa uu leeyahay dabeecad wanaagsan, waxaanan arki karnaa in uu ku soo barbaaray si caddaalad ah, oo leh hooyo daryeel leh oo ilaalisa isaga. Paul ma haysto sabab uusan ula falgelin Anthony waana sababta ay saaxiibo u yihiin. Waxaa lagu soo barbaariyay inuu ixtiraamo qof walba iyada oo aan loo eegin asalka ay ka yimaadeen ama sida ay u dhaqmaan waana sababta uu saaxiib ula yahay Anthony.
Kadib waxaan leenahay Anthony. Si la mid ah Bawlos wuxuu la koray hooyo laakiin waa la dayacay. Tani waxaynu aragnaa marka ama la xidho, ama hooyadii ay awoodi waydo inay timaado albaabka marka uu garaaco. Tani waxay muujinaysaa in Anthony hooyadiis ay ka duwan tahay Pauls. Iyadu waa mas'uul darro, dayacan oo runtii uma muuqato inay muujinayso wax welwel ah oo ku saabsan Anthony, kaliya waxay siinaysaa lacag uu ku iibsado cunto marka uu garaaco albaabka gurigiisa si la ii ogolaado. Runtii maan helin sabab macquul ah sida sababta aan ugu maleeyay in hooyada Anthony ay tahay isticmaale daroogo, si kastaba ha ahaatee waa la malaysanayaa.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay Duncan, oo aan marka hore ku aragno goobta bilawga filimka markii Anthony iyo Paul ay burburiyeen safarkii. Duncan waa cidhifka kale waana lidka Paul. Ma uusan helin korin toosan oo waxaa soo koriyey nin daroogada ka ganacsada oo isticmaala. Waxaan ku aragnaa filimka waxaana si weyn loo soo jeediyay in Duncan uu si joogto ah u garaaco aabihiis. Ma jiro meel kale oo uu aado dooqa keliya ee uu leeyahay waa inuu joogo. Aragtidayda Duncan waxa uu soo maray korriintii ugu xumayd, taasna waan ka arki karnaa filimka. Waa mid qallafsan, aan daryeelin oo si ixtiraam darro ah isu qaada.
Si la mid ah saddexda wiil waa 3 heer ama heerar sida aan u dhigay. Paul waa meesha aad rabto in ilmahaagu joogo, Anthony si tartiib tartiib ah ayuu u galay dembi, Duncanna wuxuu horeyba ugu jiray xagga hoose. Waxa jira 2 shay oo ay dhamaantood ka siman yihiin. Habka loo soo barbaariyay ayaa ku xiran falalkooda iyo xaaladahooda hadda, iyo nooca Junkyard ee dhammaantood isku xira.
Muhiimadda barbaarinta iyo sooyaalka
Anthony & Paul caruur ahaan
Way adag tahay in la sheego waxa ay jilayaasha dhabta ahi ku fikiri lahaayeen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee goobta dhamaadka. Waxaan u maleynayaa inay ammaan tahay in laga soo bilaabo muujinta Anthonys iyo Paul wejigiisa inay labadooduba naxeen, waxaan filayaa in Anthony uu ka badan yahay Paul. Anthony wuxuu u arkaa iska horimaadka ugu dambeeya khiyaano. Bawlos dhab ahaantii wuxuu u sheegay saaxiibkii waana la kaxaystay. Bawlos waxa uu dareemay naxdin geerida ka dhacday Junkyard iyo dabka ka kacaya. Si kastaba ha ahaatee waa dhammayntii ugu dambaysay ee xidhiidhka labada wiil waxaanan filayaa inay runtii ku habboon tahay. Bawlos waxa uu ogaa waxa ay samaynayaan in ay khaldan yihiin taasina waa sababta uu u caddeeyey (inta badan) Duncan iyo Anthony. Anthony wuxuu u muuqdaa inuu raacayo Duncan wax kasta oo uu sameeyo iyo Duncan, si fiican, waan ognahay waxa uu damacsan yahay iyo dhibaatooyinkiisa.
Qodobka aan isku dayayo inaan halkan ku sheego waa korintooda, oo ay ka sii muhiimsan tahay sida ay muhiimka u yihiin. Anthony ayaa hadda bilaabay inuu simbiriirixdo halka Paul uu ku jiro xaalad wanaagsan. Sababta uu Anthony si indho la'aan ah ula socdo Duncan waa isagoo aan haysan hooyo daryeesho oo u sheegta in aysan u sheegin oo ay ka sii muhiimsan tahay inaad tusaale u noqoto waxa saxan iyo qaladka aduunkan iyo cidda ay tahay inaad ku darto oo aad ku kalsoonaato saaxiibkaa iyo cidda ay tahay inaad si fiican uga fogaato. Waxaan filayaa in Junkyard uu isku dayo inuu baro akhlaaqdan, waxaana hubaal ah inay iga dhigtay inaan ka fikiro barbaarintayda. Dadka qaar lama siiyo fursado la mid ah kuwa kale, qaar waa la koray oo la dayacay waxaana filayaa in tani ay tahay waxa Junkyard muujinaya.
Dhammaadkii waa wax aan isla markiiba ogaaday maadaama aan si sax ah u garanayay qofka weerarka geystay. Waxaa ka dambeeya dhammaan sawirada biligleynaya, waxaan arki karnaa Anthony wajigiisa gabaabsan markii uu soo gaaray mindida. Anthony ma ogaa in uu ahaa Bawlos uu hadda uun mindi ku dhuftay? Haddii tani run tahay waxay u furaysaa filimka culeys dhan oo ah fursadaha kale waxayna ka tagaysaa dhamaadka ilaa fasiraado. Wax kale oo lagu dari lahaa waxay noqon lahayd haddii Bawlos uu dhab ahaan garanayo inuu isagu ahaa kii mindida ku dhuftay. Tani miyay noqon doontaa waxa ugu dambeeya ee Bawlos ka fikirayo marka uu siibto?
Filimku wax badan ayuu ka tagayaa male-awaalka ka dib dhamaadka mana aha kaliya halkan in aan aragno tan. Tusaale ahaan sidaan hore u soo sheegay filimku wuxuu leeyahay wada hadal yar oo inta badan macluumaadka aan ka helno jilayaasha waa mid muuqaal ah. Xaqiiqada ah in filimku awood u leeyahay inuu soo gudbiyo sheeko badan habkan waa mid aad loogu qanacsan yahay sababtoo ah ma ahan inaan aad ugu tiirsanaano. Isla mar ahaantaana filimku wuxuu sidoo kale maamulaa inuu ka tago walxaha ilaa tarjumaadda, taas oo u oggolaanaysa daawadayaasha inay la yimaadaan aragtidooda.
Mid ka mid ah tusaale ahaan tan waa hooyada Anthony. Kaliya waxaan gartay tan markii aan Junkyard ahaa mar labaad runtii naftayda kuma canaanto in aanan ogaanin. Waxaan kaliya aragnaa hooyada Anthony hal mar muuqaalkeeda markii ay siisay lacag uu ku iibsado cunto. Intaa ka dib mar dambe ma aragno. Waxaan tilmaami lahaa in muuqaalkeedu uu ahaa markii Anthony iyo Paul ay ahaayeen carruur yaryar oo aanay ahayn markii ay dhallinyara ahaayeen. Haddaba maxay tani muhiim u tahay?
Anaga oo ku jira qeybta labaad ee filimka marka aan aragno Paul iyo Anthony waa dhalinyaro in hooyada Anthony aysan ku jirin gudaha guriga marka ay soo galaan ka dib markii safarku dab qabsado. Waxa aan u arkay in ay aad u argagax badan tahay markii ay guriga soo galeen, waxaana meesha yaallay wax dhib ah oo aan ahayn furaash dhulka yaalla. Maxaa ku dhacay? Ma ahan wax marka hore soo bixi kara laakiin waxaan ka helay mid xiiso leh si kastaba ha ahaatee. Muuqaalkeeda hal mar ayaa ka soo horjeeda aragtida hore ee daawadayaasha ee Anthony iyo noloshiisa.
Dhammaadkii wuxuu ahaa mid qurux badan. Khabiir wakhti ku leh soo dirid muusik oo heersare ah. Xaqiiqda ah in ay muujisay labada wiil in ay iska indha-tiraan Junkyard mar kale ka hor inta aysan cararin si aan waxba galabsan waxay ahayd mid qumman oo uma maleynayo inay jirto si kale oo loo samayn karo si ka wanaagsan.
Waad ku mahadsan tahay akhrinta, fadlan like, share and comment.
Ma ka heshay maqaalkan? Waxaad iibsan kartaa badeecado si aad u taageerto abuurayaasha goobta iyo qorayaasha joornaalka.net
CVS Hannya Demon Koofiyad Horyaal [3 Midab]
Shaati-gacmeedka gaagaaban ee haweenka CVS Hannya
Naqshadeynta Gabdhaha CVS Gangsta T-Shirt
CVS Dusk Jinni T-Shirt
Gelitaan Hore Shaashadda Shaashadda Maarso 2021 Khadka tooska ah wuxuu ku darayaa Filim Toos ah oo Tokyo Ghoul iyo qaar kaloo badan!
Gelitaanka Xiga Xidigta Instagram Jeon Yebin [전 예빈] Waxay Ku Muujineysaa Bikini Cusub Instagram Post